बेबी स्नान: मोडेल को एक किसिम
बच्चाहरु को उपस्थिति को लागि तयारी मा, खुसी आमाबाबुले सबै आवश्यक वस्तुहरू र सामान खरिद गर्न अग्रिम प्रयास गर्नुहोस्। यी यो दैनिक स्वच्छता कल्पना गर्न गाह्रो छ, जो बिना बच्चाहरु र स्नान समावेश। आधुनिक पसलहरूमा दुवै विदेशी र घरेलू निर्माताहरु यस्तो विशेषताहरु को एक विस्तृत चयन प्रदान। तर जो मोडेल आफ्नो प्राथमिकता दिन स्नान? हाम्रो लेखले एक कठिन विकल्प निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ।
पहिलो र मुख्य यसलाई बच्चा स्नान खरीद को advisability उल्लेख लायक छ। केही आमाबाबुले गल्ती बच्चालाई साझेदारी बाथरूम मा पौडी खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। पहिले, यो unhygienic छ। दोस्रो, बच्चा को जन्म आवश्यक छ लगत्तै केही सावधानीहरु पालन गर्न - को umbilical घाउ ठीक निको पार्ने छ रूपमा, स्नान मात्र विभिन्न जडीबुटी को वाहेक संग पानी उम्लिरहेको मा ठाउँ लिन सक्छ। एक ठूलो टब भर्न सहमत उम्लिरहेको पानी एकदम समस्याग्रस्त छ। बच्चा bathtubs किन बच्चा को दैनिक जीवन को एउटा अत्यावश्यक विशेषता बन्न छ। त्यसोभए, तिनीहरू?
बेबी स्नान स्नान धेरै प्रजातिहरू छ। यहाँ एउटा संक्षिप्त विवरण छ।
Anatomical मोडेल •। एक बच्चा शरीर को संरचना दोहर्याउँदै विशेष निर्मित स्लाइड संग स्नान। एक बच्चाको रूपमा यसलाई मा एक थोडा उच्च र एउटै तेर्सो स्थिति छ, यो धेरै सजिलो हुन्छ नुहाउने - आमा हात बिल्कुल मुक्त छन्। बच्चालाई एक सानो पुरानो हुँदा, यो ट्यांक को तल्ला र फल्स रोक्न गर्न खुट्टा बीच स्लाइडहरू को रूप मा एक अवरोध मा बस्न सम्भव हुनेछ। यसको सबै सुविधा भए तापनि यस मोडेल एक महत्वपूर्ण drawback छ - बच्चा को पेट मा राख्न सकिँदैन स्नान समयमा।
• क्लासिक छोराछोरीको स्नान। त्यहाँ enamelled वा प्लास्टिक बनेको छन्। थप मद्दत आवश्यक - यो बेफाइदा कि बच्चा एक्लै नुहाउने धेरै गाह्रो हुनेछ छ। तर यो मोडेल यसको ठूलो आकार को बच्चा बच्चा गर्न आवश्यक ठाउँ र सान्त्वना प्रदान किनभने पहिले नै हुर्किसकेका पूर्ण फिट।
• गोलो स्नान। बेबी स्नान राउन्ड आकार अधिकतम आमा गरेको गर्भमा दोहोरिन रूपमा, दोस्रो नाम, "आमाको पेट" छ। यो मोडेल बच्चा सुरक्षित महसुस गर्न अनुमति दिन्छ। अलिकति फिर्ता र बच्चा टाउको समर्थन फिर्ता उठायो। धेरै नै ट्रे पूरा गर्न र खन्याउन र पानी खन्याउन सजिलो छ जो एक ह्यान्डल एक बाल्टिन छ।
• निर्मित बच्चा स्नान। छोराछोरीको ड्रेसर वा भाग हुन सक्छ तालिका परिवर्तन। कि सुविधाजनक सबै पौडनु लागि आवश्यक गुणहरू हातमा हुनेछ। यी मोडेल पाङ्ग्रा र पानी सकिन एक विशेष नली संग सुसज्जित छन्।
• Termovannochki। पानी सकिन निर्मित थर्मामीटर, साबुन बक्स र प्लग संग मोडेल। स्थिर खुट्टा र गैर-पर्ची तल सतह बच्चा को सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस्। साथै, बच्चा हुनेछैन आफ्नै प्लग पुल गर्न सक्षम - यो एक थर्मामीटर अन्तर्गत लुकेको र केवल उठाने पछि उपलब्ध हुन्छ यो क्लिक सम्म छ।
• जीवाणुरोधी मोडेल। जीवाणुहरु नष्ट एउटा घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने प्रयोग निर्मित।
• शवर केबिन लागि ट्रेहरू। तिनीहरू एउटा सानो गोलाकार आकृति र एउटा सानो सीट र पानी खर्च नगरेर लागि प्वाल छ। 1.5 वर्ष देखि बच्चाहरु लागि डिजाइन। कि उमेर अघि एक राउन्ड ट्रे प्रयोग गर्न सम्भव छ।
• Inflatable बच्चा स्नान। संकुचित र पोर्टेबल संस्करण, तपाईं एउटा यात्रा लाग्न सक्छ। स्थिर मोडेल, बच्चालाई टाउको लागि प्रक्षेपण छ जो।
मोडेल को सबै प्रशस्त जाँच, तपाईं सबै भन्दा राम्रो विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो बच्चा को सुविधा र सान्त्वना चयन मा निर्धारण कारक हुनुपर्छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ।
पाक लागि स्लिभ: सुझाव गृहिणी
घर उपचार संग Tissues देखि जलेको फलाम कसरी सफा गर्न
छहरा पेन "Parker": समीक्षा, फोटो। कसरी फोहरा कलम "Parker" भर्न?
कसरी वस्त्र मा तेल दाग धुनु
ठीक स्नान चटाई र शौचालय सज्जित - राम्रो स्वास्थ्य र राम्रो आत्माको गर्न प्रमुख
संयुक्त अरब एमिरेट्स मा बाँकी बारेमा समीक्षा। एक परी कथा यात्रा
सबै-रूसी त्योहार शैक्षिक रचनात्मकता - अनुभवको आदानप्रदानका लागि कार्यशाला
अस्थायी दर्ता लागि कागजातहरू - तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ के
को Lyric Lermontov मा एकाकीपनको विषय। गीत - डायरी पृष्ठ
एक फूलगुच्छा ठूलो देखिन्छ कि गुलाब - Raffaello
शहर घर र देश घर लागि नलसाजी। शौचालय-सीडी
विकल्प र डिजाइन गोलो नङ। 2017 मा नयाँ चलन
को दराज लागि पुस्तिका: प्रकार र आफ्नो विशेषताहरु
पक्कै तपाईंलाई स्तनपान गर्दा आफ्नो कपाल डाई गर्न सक्नुहुन्छ कि?